Ny Semalt dia manome tombon-tsoa mahomby amin'ny data Scraping Tool
Tahaka ny an'ny hafa tranonkala miongotra , GitHub dia mamoaka vaovao avy amin'ny tranonkala samihafa amin'ny fomba haingana sy mahomby. Ity fitaovana ity dia manala indrindra ny angona avy amin'ny sary ary mahatalanjona ny traikefa niainanao.
Ireo mpitarika raharaham-barotra dia mandamina tsy tapaka ny fampahalalana ary maniry ny hikirakana amim-pahombiazana, nefa tsy mampandefitra ny kalitao. GitHub no hany fitaovana izay manangona, mamerina ary mamonjy ny angon-drakitra ao amin'ny endrika mahafinaritra. Ny sasany amin'ireo tombontsoa mampiavaka azy dia resahina etsy ambany.
1 - notvorrat checkliste pdf. GitHub dia manampy ny angon-drakitra betsaka
Amin'ny GitHub, afaka manangona sy mandamina ny angon-drakitra any anaty tranonkala ianao ary afaka mandefa azy any amin'ny fiara sarotra anao mivantana.Misy sary sy video marobe ahitana fampahalalana mahasoa. Amin'ny alàlan'ny tranokala tsotra dia tsy azo atao ny maka sary avy amin'ny tahiry PDF, JPG sy PNG. Na dia izany aza, mahatonga an'i GitHub ho mora aminao ny manakona ny fampahalalam-baovao avy amin'ny antontan-taratasy PDF sy ny karazan-tahiry hafa. Raha tsorina, GitHub dia hanampy anao hahatakatra tsara kokoa ny fandraharahana eo amin'ny orinasa ary hanokatra ny varavaran'ny fahafahana vaovao.
2. Tadiavo ny antontanisa marina miaraka amin'i GitHub:
Ny fitaovana fampiasana angon-drakitra ampiasaintsika dia tsy mahazo vaovao marina sy marina. Mifanaraka amin'ireo tolotra ireo, ny GitHub dia mamory ny angon-drakitra marina ary manadihady ny kalitaony. Noho izany raha te-hanakona ny fampahalalana avy amin'ny tranonkala mpifaninana ianao dia tokony hanandrana an'i GitHub. Ity fitaovana ity dia manome valiny avo lenta ary tsy manome votoaty dika mitovy amin'ny mpampiasa azy.
3. GitHub no mamonjy ny fotoanao:
Ny haingam-pifaneraserana izay misy dia manome ny fahasamihafana rehetra. Miaraka amin'i GitHub, afaka mametaka hatramin'ny 20,000 sary sy antontan-taratasy ianao ao anatin'ny 50 minitra. Noho izany, ity fitaovana ity dia mamonjy ny fotoana sy ny angovo ary ny angon-drakitra amin'ny haavo haingana. Ny GitHub dia mety amin'ny fanombohana sy webmaster ary manampy azy ireo hitondra fitarihana bebe kokoa amin'ny Internet.
4. Mitoera hifaninana amin'ny GitHub:
Tena ilaina amin'ny fampivoarana ny fampiasana ny angon-drakitra. Miaraka amin'i GitHub ianao dia afaka mifantoka amin'ny fifaninanana ary afaka mahazo ny mombamomba ny fironana ankehitriny. Ity fitaovana ity dia manome vaovao momba ny tranonkala e-commerce, orinasan'ny FMCG, ary toeram-pivarotana, izay mahatonga anao ho mora ny mamaritra ny toerana misy ny marika. Ireo endri-tsoratra farany dia manampy amin'ny fampiroboroboana sy fanentanana ny marikao amin'ny fomba tsara kokoa.
5. Ny angon-drakitra amin'ny toerana iray:
Miaraka amin'i GitHub, azonao atao ny mahazo angona amin'ny format malalaka. Ny aterineto dia miteraka fifandimbiasam-baovaonan'ny boriborintany isaky ny minitra. Ity fitaovana ity dia hanampy anao ny angon-drakitra avy amin'ny tranonkalan'ny tambajotra sosialy sy ny famoaham-baovao. Azonao atao koa ny mikendry ireo blôgy teknolojia sy tranonkala fanentanana mba hanatsarana ny laharan'ny toerana misy anao. Tsy voatery hifanaraka amin'ny angon-drakitra na raki-tsoratra ianao satria ny GitHub dia mandrindra ny angon-drakitrao amin'ny format malalaka sy azo henoina ary mamonjy fotoana betsaka. Ity fitaovana ity dia mety ho an'ny orinasa, orinasa an-tserasera, orinasa orinasa sy orinasa.
Ny hatsaran-tarehin'ity data ity dia manasaraka ny serivisy dia mahazatra tanteraka ary mifanaraka amin'ny fepetra tsara. Miaraka amin'ny GitHub, azonao atao ny manara-maso ny teny fanalahidin'ny mpifaninana aminao, mampifanaraka ny pejin'ny tranonkala ary mamoaka ny vaovao avy amin'ny rohy anatiny sy ivelany. Betsaka ny orinasa no matoky ny GitHub ary mampiasa io fitaovana io tsy tapaka.